Baddy Ackonda oo shaki ka muujiyey hadalkii sheekh..
Warar: June 25, 2007
Baddy Ackonda oo shaki ka muujiyey hadalkii sheekh Aweys
Cali Mahdi �waxaan xiriir la sameynay..
Ciidamada Itoobiya ee qaraxa loogu gaystay..
Qarax xoogan oo ka dhacay suuqa Bakaaraha...
Qaraxyo weli ka sii socda Magaalada Muqdisho...
Beri oo 26-ka Juun laga xusayo meelo..
Beelaha Hawiye oo ka hadlay Xaaladda Kismaayo
Odoyaasha Beesha Sade ee Kismaayo oo...
Afhayeenka Ciidamada Uganda ee Soomaliya jooga Kabtan Baddy Ackonda ayaa si kulul u beeniyey war ka soo yeeray Guddoomiyaha Golaha Shuurada Maxaakiimta Islaamiga Sheekh Xasan Daahir Aweys ee ahaa in ciidamada Uganda iyo kuwa Itoobiya ay si isku mid ah u weerari doonaan, waxa uuna warkaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona laheyn. Afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada Uganda aysan marnaba ka qayb-qaadan dagaalkii dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda oo is garabsanayey iyo kooxihii ka soo horjeeday ee ka dhacay Muqdisho bilihii Maarso iyo April.
Afhayeenku waxa uu sheegay in ciidamada Uganda ay Soomaaliya joogaan sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen nabadda iyo dib u heshiisiinta Ummadda Soomaaliyeed. �Dadkii barakacay ayaanu gaarsiinay raashin iyo biyo� ayuu yiri Afhayeenka oo intaa raaciyey �waxaas oo dhan waxaan u sameeneynay sidii aan u badbaadin lahayn shacabka Soomaaliyeed�. Afhayeenku waxa uu sheegay in xitaa ay daaweeyeen dadkii ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay qaarkood haatan ku jiraan isbitaalka Ciidamada Uganda ku leeyihiin Muqdisho. Afhayeenku waxa uu sheegay in ciidamada Uganda ay ilaaliyaan ilaha dhaqaalaha ee Magaalada Muqdisho, sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka shaqeeyaan sidii ay meel isugu keeni lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Mas�uuliyiinta Maxaakiimta Islaamiga ah ayaa horey u sheegay in ciidamada Uganda ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaana ay dusha ka eegayeen xasuuqii loo gaysaneyay shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalana waxa uu sheegay in goobaha ay degan yihiin ay ahaayeen kuwo looga soo duulo shacabka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed Cali Mahdi Max�ed oo maalmahan ku maqnaa Magaalada Nayroobi ayaa shalay dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay in beesha caalamka ay diyaar u tahay inay si buuxda u taageero shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed oo lagu wado in la qabto 15-ka Juulaay.
�waxaan Beesha Caalamka isku afgaranay kharashka ku baxay shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya� ayuu yiri Cali Mahdi Max�ed oo sheegay in waqti aan dib loo dhigi doonin shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, waxaa kale oo uu sheegay in la soo gebagabeeyey hoolkii lagu qaban lahaa shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, mar waxa laga weydiiyey in ay xiriir la sameeyeen Maxaakiimta Islaamiga ah, waxa uu sheegay Cali Mahdi in ay xiriir la sameeyeen Mas�uuliyiinta ugu sareysa Maxaakiimta Islaamiga oo uu sheegay inay ku wargeliyeen in ay ka soo qaybgalaan shirka dib u heshiisiinta Soomaliyeed.
Dhawaan ayaa Guddoomiyaha guddiga fulinta Maxaakiimta Islaamiga Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in shirka dib u heshiisiinta uu yahay mdi lagu dibindaabyeynayo shacabka Soomaliyeed, laguna seta-dheereysanayo in dalka lagu sii hayo Gumeysi.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Halgan ee Gobalka Hiiraan waxay sheegayan in Ciidamadii Itoobiya ee halkaasi qaraxa loogu gaystay ay dalbadeen gurmad aad u xoogan iyo waliba ciidamada baara miinooyinka.
Ciidamada Itoobiya ayaa ilaa iyo hadda dhaafi la� goobtii qaraxa loogu gaystay, iyagoo ka cabsi qaba in qarax kale wadada loogu aaso.
Ciidankaan oo gaaraya ilaa iyo 25 gaari kana tagay magaalada Muqdisho ayaa weli deegaankaaasi ku sugan, waxayna kulan la yeesheen Odoyaasha deegaanka, waxayna ka dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kooxihii ka dambeeyey qaraxaasi, waxaana shalay sidoo kale halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka.
Iyadoo habeenkii saddexaad uu galay bandowgii lagu hayey Magaalada Muqdisho ayaa haddana waxaa socda qaraxyada iyo dilalka loo gaysanayo Ciidamada Dowladda Federaalka.
Xalay ayaa qaraxyo waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana meelaha qaarkood ka dhacay weeraro toos ah, gaar ahaan xaafadaha Hawl-wadaag iyo Hodan.
Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda ayaa lagu dilay Xaafadda KPP, isagoo ka soo baxayey Masaajidka Sheekh Cali Suufi, markii Salaadda maqrib la tukaday kadib.
Ciidamada Dowladda ayaa iyagu ku suganaa Isgoysyada Magaalada Muqdisho, iyadoo xaafadaha inta badan horey u gelin.
Bandowga ayaa dadka qaarkiis waxay sheegeen in uusan waxba ku soo kordhin xaaladda Nabadgelyo ee magaalada, waxaana sii kordhaya qaraxyada loo gaysanayo xubnaha ka tirsan Dowladda Fedeaalka.
Shalay galabnimadii ayaa waxa uu qarax ka dhacay isgoyska Hawl-wadaag, waxaana qaraxaasi ku dhintay labo qofood, oo labo ka mid ah ahayaeen dumarka ka ganacsada Qaadka.
Qaraxaan oo lala damacsanaa gaari ay lahaayeen ciidamada Dowladda ayaa qaraxaasi markii uu dhacay waxay Ciidamadu fureen rasaas ay sidoo kale ku dhaawacmeen dhowr ruux.
Dadweynaha rayidka ah ee Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan waxay bartil-maameed u noqdeen qaraxyada iyo rasaasta ay furayaan ciidamada Dowladda, waxaana bishii la soo dhaafay ilaa iyo haatan qaraxyadaasi iyo rasaastaasi ku dhintay dad gaaraya Konton qofood.
Qaraxii shalay ayaa waxa uu khalkhal geliyey ganacsigii suuqa Bakaaraha, iyadoo ganacsatada qaarkood xireen goobahoodii ganacsi, sidoo kale waxaa istaagay isku socodkii gaadiidka oo markii dambe dib u furmay.
Dhanka kale Magaalada Muqdisho waxaa xalay laga maqlay qaraxyo iyo rasaas, iyadoo tan iyo xalay oo dhan la maqlayey rasaasta goos-gooska ah oo la sheegay in ridayeen ciidmada Dowladda.
Bandowga lagu soo rogay ayaa hakad gelin amaba aan joojin qaraxyada loo gaysanayo ciidamada Dowladda iyo goobaha kale ee ay ku sugan ciidamada Itoobiya, balse waxay dadka qaarkii qeexayaan in ayba sii kordheen qaraxyadaasi.
Dowladd Federaalka ma aysan sheegin xiliga la qaadayo bandowga, hase yeesheen mas�uuliyiinta Dowladda qaarkood ayaa sheegay in bandowgaasi uu wax weyn ka qabtay nabadgelyada Magaalada Muqdisho
Beri oo ku began 26-ka juun oo ah maalintii ay xoriyadda qaateen gobalada Waqooyi, waxaana haatan socda diyaargaroow loogu jiro maalintaasi.
Dowladda Federaalka ayaa la filayaa in manta ay magacowdo guddi isku dubarida munaasabadaha 1-da luulyo iyo 26-ka Juun.
Munaasabadahani ayaa waxay ku soo beegmeen xili Magaalada Muqdisho ay ka jiraan qaraxyo iyo dilal, iyadoo munaasabadahan oo kale ay dhici jireen banaanbaxyo iyo fantiyo weyn oo lagu xusayo Maalmaha xoriyadda.
Wararka naga soo gaaraya Baydhabo ayaa sheegay in magaaladaasi ka socoto diyaargarow xoogan oo loogu jiro maalmahaasi si weyn looga qiimo dalka Soomaaliya.
Dadka qaarkii ayaa qaba in xilgaani aysan habooneyn in la qabto xaflado ku aadan Maalinta xoriyadda maadaama dalka haatan ku sugan yihiin ciidamo Itoobiyaan ah oo ay sheegeen in ay sharci daro dalka ku soo galeen.
Beelaha Hawiye oo ka hadlay Xaaladda....
Kulan ay shalay isugu yimaadeen Waxgaradka iyo Odoyaasha Beelaha Hawiye ayaa waxaa looga hadlay xaaladda Magaalada Kismaayo, waxayna cambaareeyeen dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo.
Labada dhinac ee ku dagaalamay Kismaayo ayay u soo jeediyeen inay khilaafkooda ku xaliyaan wada hadal iyo isafgarad, isla markaana dhawaan beelaha Soomaaliyeed ee gobalkaasi degan laga qaybgeliyo wada hadalada iyo maamulka loo sameynayo.
Odoyaasha Beelaha Hawiye waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka qayb-qaataan dib u heshiisiin la dhex dhigo kooxaha ku dagaalamaya magaalada Kismaayo.
Dhanka kale Qaar ka tirsan Mas�uuliyiinta Dowladda ayaa Dowladda Federaalka ku eedeeyey in ay mas�uul ka tahay dagaalada mar kasta ku soo noqnoqonaya Magaalada Kismaayo.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in kulan ay shalay isugu yimaadeen Odoyaasha Beesha Sade looga hadlay xaaladda Magaalada Kismaayo, waxayna ku baaqeen in marka hore xabadda la joojiyo wixii khilaaf ahna wada hadal lagu xaliyo, sidoo kale waxay ku baaqeen in sida ugu dhasiyaha badan dib loogu celiyo hantidii laga qaatay qaar ka mid ah dadka degan Magaalada Kismaayo.
Odoyaasha ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen sidoo kale ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan Maleeshiyooyinka looga saaro magaalada Kismaayo, isla markaana la hawlgeliyo ciidamada Booliiska si ay u sugaan nabadgelyada Magaalada.
Sidoo kale waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo wada waan-waan nabadeed si xal loogu helo magaalada Kismaayo, sidoo kale waxay sheegeen in ay la shaqeynayaan Dowladda Federaalka, iyagoo dowladdana u soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso maamul cadaalad ku dhisan.
Dhawaan ayaa Magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen dad badan, kaas oo u dhexeyey labo ciidan oo ka tirsanaa Dowladda Federaalka oo hab beeleed u kala saftay.
Ciidankii ku sugnaa magaalada Kismaayo ayay u suuragashay in ay Magaalada ka saaraan kooxihii ka soo horjeeday, waxayna Odoyaashu sheegeen in la qabto kulamo kale oo lagu soo afjaro khilaafka sii daba dheeraanaya.
Afhayeenk Ciidanka Uganda oo shaki ka muujiyey hadalkii sheekh Aweys